Burmese | Good Soil
ကောင်းသောမြေ ဧ၀ံဂေလိနှင့် တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအမှုတော် (Good Soil Evangelism & Discipleship) သည် ယုံကြည်ခြင်းများနှင့် ယဥ် ကျေးမှုများ ပြိုင်ဆိုင်နေသော လောကကြီးထဲတွင် ခရစ်တော်၏ နောက်လိုက်များကို ဘုရားသ္ခင်၏ မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၀တ္ထုဖြင့် ၀ေငှပြင် ဆင်ပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအမှုနှင့် သမ္မာကျမ်းစာပါ ဘုရားသ္ခင်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်း၀ေငှ ခြင်းအမှုတော်တို့ကို အခြေခံလျက် အမှုတော်ရင်းမြစ်များကို တိုးတက်၀ေငှလျက်ရှိပေသည်။ ကောင်းသောမြေ ဧ၀ံဂေလိနှင့် တပည့်တော် ဖြစ်ခြင်းအမှုတော်၏အမည်သည် မြေများနှင့်မျိုးစေ့ဥပမာတော်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ဟူသည် သတင်းကောင်းအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် “ကောင်းသောမြေ” ကို ယေရှုကမည်ကဲ့သို့ အနက်ဖွင့်တော်မူခဲ့ပါသနည်း? ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကုနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် “ကောင်းသော မြေ” ကို ကွဲပြားသောစကားလုံး သုံးမျိုးဖြင့် ယေရှုသုံးခဲ့သော မတူသောကာလတို့အတွက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
“ကောင်းသောမြေ၌ အစေ့ကိုကြဲခြင်းအကြောင်းအရာကား တရားစကားကိုကြား၍ နလုံးသွင်း*သဖြင့်...”
*နှလုံးသွင်း [ဂရိလို၊ suniemi] သည် ဟူသည် “စိတ်နှလုံးဖြင့်ဖမ်းဆုပ်သည်”၊ (သို့) “ပြည့်၀သောအဓိပ္ပါယ်သို့ရောက်ရန် သီးခြားအချက်အလက် အားလုံးကို စုစည်းရယူသည်”
“အကြောင်းအရားကား တရားစကားကိုကြား၍ ခံယူ*သဖြင့်...”
*ခံယူ [ဂရိလို၊ paradechomai] သည်ဆိုသည်မှာ “လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လက်ခံသည်”၊ “ကြိုဆိုသည်” (သို့) “ပွေ့ဖက်သည်”
“ကောင်းသောမြေ၌ရှိသောသူကား ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့် တရားစကားကိုကြားလျှင် စွဲလမ်း*သောအားဖြင့်...”
*စွဲလမ်း [ဂရိလို၊ katecho] သည် ဆိုသည်မှာ “တစ်စုံတရာလွတ်မသွားရန် ခိုင်မြဲစွာ ဖမ်းဆုပ်ထားသည်”
ကောင်းသောမြေ ဧ၀ံဂေလိနှင့် တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအမှုတော်သည် လူများ၊ ခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်၊ အမှန် အကန်ပွေ့ဖက်ရန်နှင့် ခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကိုင်ရန် ဂရုတစိုက်ဖြင့် သေချာအောင်ကြိုးစား၍ အမှုတော်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
မယုံကြည်သူတစ်ဦး သတင်းကောင်းကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန် ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီရမည်နည်း?
မယုံကြည်သူတစ်ဦးအား သတင်းကောင်းကို ရှင်းပြရာတွင် သူသည် သမ္မာကျမ်းနှင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကို အနည်းငယ်သိ/ လုံး၀မသိခြင်း ဖြစ်တတ်သည်မှာ လက်ငင်းတွင် သူ့ကို ဤလောကမှ အယူအဆသဘောတရားများက အမှန်တရားကိုမတွေ့အောင် နားလည်မှုလွဲနေစေသည်။ သတင်းကောင်းဆက်သွယ်မှုဖြစ်စဥ်၌ “လောကအမြင်ဆူညံသံ” များကို ထိုးဖောက်နိုင်ရန် သတင်းကောင်းကို နားလည်ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာမှ အချက်အလက်များကို ရှင်းပြရန် အလွန်အရေးကြီးလှပေသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းရန် သမ္မာကျမ်းမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀တ္ထုသမိုင်းအချက်များကို ဦးတည်ရှင်းပြရန် လိုအပ်ပေသည်။
မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၀တ္ထု သည် အချိန်အတွက် လွယ်ကူမှု (ချုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်၊ တိုးပွားနိုင်) ရှိသည့် ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆယ့်ငါးမိနစ် မှ နာရီပေါင်းများစွာအထိ ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမ္မာကျမ်း၀တ္ထုကို တင်ဆက်နိုင်ပေသည်။ သတင်းကောင်းနှင့်ဆိုင်သော သမ္မာကျမ်းကိုလေ့လာ ခြင်းအတွက် ပုံစံထုတ်ထားရာတွင် တစ်ဦးချင်း (သို့) အဖွဲ့ငယ်များအတွက်ဖြစ်သော်လည်း ယုံကြည်သူများအတွက်လည်း ဘုရားသ္ခင်၏ ရွေး နှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကို နားလည်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျမ်းစာအဖြစ်အပျက် ၄၀ (ဓမ္မဟောင်းမှ ၂၀ နှင့် ဓမ္မာသစ်မှ ၂၀) ကို မြေပုံများနှင့်တကွ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
သတင်းကောင်းကို စွဲမြဲစွာဆုပ်ကိုင်တတ်သော ယုံကြည်သူသစ်တစ်ဦးဖြစ်ရန် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း?
ဧ၀ံဂေလိလုပ်ငန်းသည် ဘုရားသ္ခင်နှင့် လူသားတို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတိုင်း တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအမှုနှင့် တွဲဆက်နေ ပါသည်။ ယုံကြည်သူစစ်ဟူသည် ခရစ်တော်၏တပည့်တော်အဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကသာ ဘုရားသ္ခင်က လုံခြုံမှုပေးနိုင်တော်မူသည်။ ဘုရား သ္ခင်သည် ကျွန်တော်တို့အား ရွေးကောက်အသုံးပြုတော်မူရာ၌ “တပည့်တော်များဖြစ်လာစေရန် ပြုလုပ်ကြဖို့” ဖြစ်လေသည်။
၀မ်းမြောက်ခြင်း ခရီးလမ်း သည် အခြေခံအားဖြင့် ယုံကြည်သူသစ်များအတွက် ပုံစံထုတ်ထားကာ အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာ ဆယ်ခုဖြင့် လေ့လာ၊ လိုက်လျှောက်ရာတွင်၊ ဘုရားသ္ခင်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကို လွှမ်းခြုံထားပြီး၊ အသက်အတွက် အချိန်ပေါင်းကူး၌၊ ကျမ်းစာ၊ ဆု တောင်းခြင်း၊ ၀ိညာဥ်တော်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သန့်ရှင်းမှု၊ သက်သေခံခြင်း၊ ဒေသအသင်းတော်နှင့် ယုံကြည်သူအသက်တာအတွက် ဘုရားသ္ခင်၏ စီမံချက်များကို လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေပါသည်။ စာအုပ်အပိုင်းငယ်တိုင်းတွင် မှတ်သားရန် ကျမ်းစာပိုဒ်ကဒ်များနှင့် နေ့စဥ် ကျမ်းစာဖတ်နိုင်ရန် အခန်းကြီးတစ်ခန်းစီကို စီမံထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
ခေါင်းဆောင်လက်စွဲ အခြေခံကျမ်းစာလေ့လာမှု စာအုပ်ငယ်တွင် အခြခံအားဖြင့် ဧ၀ံဂေလိဆိုင်ရာ တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် လေ့လာမှုကို ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် တစ်ဦးချင်း တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် ကဏ္ဍအတွက် ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော် ဆက်စပ်သော အဖွဲ့ ငယ်များ (သို့) ကူးပြောင်းလာသူလူသစ်များအတွက် သင်တန်းစာအုပ်အဖြစ်လည်း သူံးနိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာများကို အခန်းဆယ်ခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး မှတ်မိသတိရရန် ကျမ်းစာကဒ်များကိုလည်း စီစဥ်ပေးထားပါသည်။
ဤသည် မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၀တ္ထုအတွက် စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော်ပါသော ခေါင်းဆောင်လက်စွဲဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် မျှော်လင့်ခြင်းအ ကြောင်း၀တ္ထုအတွက် တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ငယ်များအတွက်သော်လည်းကောင်း လေ့လာသင်ယူရန်အချက်များဖြင့် စီစဥ်မှု ပြုထားသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၀တ္ထုတွင် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် အပိုင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
အခြားအချက်အလက်အတွက် (သို့) ၎င်းရင်းမြစ်များကိုမှာယူရန်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းကြားပါ - Myanmar@SowandHarvest.com.
အပိုဆောင်း ရင်းမြစ်တို့ကို ဤစာမျက်နှာတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် - GoodSoil.com/Resources.